Ozi WhatsApp ise na-egosi na ọ hụghị gị n'anya Site na Linux
N’enweghị mgbagha WhatsApp Ọ bụ ụzọ ndị di na nwunye jiri hụ ibe ha n'anya na-ekwukọrịta, ọ bụ ezie na ọ dị mma taa na onye ozi ozigbo ị ga-eji gwa onye òtù ọlụlụ gị n'oge a, nke a na-emekwa ka enweghị ntụkwasị obi nke ụfọdụ ndị mmadụ bawanye.
N'ihi nke a UNICEF nyere ọrụ nke ịkesa mkpọsa nke obodo Madrid kpọrọ kpọrọ Ebipụla onwe gị, ozi ya bụ kpọmkwem “you na-enweta ma ọ bụ zipu ụdị ozi a? Obi sie gị ike na nke a abụghị ịhụnanya. Chọpụta ya ma mee ihe! "
Mgbasa ozi a nwere nzube nke ịkụziri ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ụdị ozi nke nwere ike ịpụta na onye òtù ọlụlụ ha nwere omume ọjọọ / ike ike, ọ bụ ya mere ha ji bipụta ndepụta nke ise a na-ahụkarị na ebe a anyị na-egosi ha:
Pay na-elebara ndị enyi gị anya karịa m
Chei, lee ka ị si maa mma taa, ịmara na achọghị m ka ndị ọzọ hụ ihe bụ naanị nke m. Zipu foto ka o nye gi ok
Ejikọtara n'oge a. Ọ bụrụ na ọ bụghị m na onye?
Achọghị m imerụ gị ahụ. Know maara na m na-eme ya n'ihi na m hụrụ gị n'anya
Read gụrụ ya ma ị zaghị. Ọ bụrụ na ị gafere m cheta na enwere m foto ụfọdụ ị gaghị achọ ka ndị ọzọ hụ
Ọ nwere ike ịdị ka ụfọdụ n'ime ozi ndị a na-egwu egwu, mana ọ bụrụ na ihe gbara ya gburugburu dị njọ, anyị ga-elebara anya na omume nke onye ọlụlụ anyị wee hụ ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma.
Ruo ugbu a ozi na-emepụta mmata banyere ojiji nke WhatsApp Enweela ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro 7500 ma nata ọtụtụ okwu ọma sitere na ọnụ ọgụgụ ndị Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Ise WhatsApp ozi na-egosi na ọ hụghị gị n'anya
sistemụ ewebata ya "su"